China Self Brewed Fresh Beer Equipment fekitori nevagadziri |JUMP
Zvekuzvibikira Nyowani Doro Equipment
Beer brewed fresh equipment zvinoreva midziyo inoshandiswa kugadzira doro, inogona kupatsanurwa kuita midziyo yedoro nyoro, midziyo yedoro diki nemidziyo yedoro diki.Zvigadzirwa zvedoro zvakazvibikira zvakanyanyokodzera mahotera, mabara, barbecue, madiki uye epakati nepakati.
Doro rakazvibikira (self brewed beer) zvinoreva doro rinobikwa wega nemidziyo yedoro.Rinodaidzwa kunzi doro rakazvibikira nekuti rinobikwa nemaoko kwete nekugadzirwa kwakakura mumaindasitiri.Kugadzirwa kwayo kwakasiyana zvachose nekwakagadzirwa nemamwe mabikirwo makuru.MuGermany, mutemo wehutsanana hwedoro wakanyatsojekesa zvinhu zvinoshandiswa pakubika doro Zvingave:
Nzvimbo yedoro rakazvibikira imhando yedoro repamusoro-soro, iro rinowanzotengeswa mune mamwe mahotera epamusoro-soro.
Nemidziyo yedu yedoro, isu tine basa rekupa rubatsiro rwehunyanzvi kwauri, pamwe chete nezvimwe zviwanikwa zvinodiwa mukugadzira doro (zvechokwadi, iwe unogona zvakare kutenga iyo mbishi zvinhu iwe pachako).
Kuvirisa kunonyanya kuvirisa tembiricha yakaderera.Nguva yekuvirisa inenge mazuva gumi -21 mazuva, imwe yeGerman beer manor manor fermentation nguva ndeye mazuva makumi maviri nemasere, kuitira kuti doro rinovirisa zvishoma nezvishoma mukupisa kwakadzika, kuravira kwakanyorova, kunhuhwirira kunowedzera kusimba, furo rakapfuma.
Doro rinobikwa kumba imhando yedoro repamusoro-soro, iro rinowanzotengeswa mune mamwe mahotera epamusoro-soro.
Michina yekubikisa doro reGerman style inonyanya kuve neanotevera masisitimu:
1. Malt kupwanya hurongwa
2. Saccharification, kuvira uye filtration system
ChiGerman chimiro chekuzvibikira doro midziyo yakagadzirwa nemhangura uye simbi isina tsvina.Iyo tsvuku yemhangura yesaccharification poto ndeyekare uye inoyevedza.Iyo midziyo inotora magetsi ekudziya modhi, iyo iri nyore kushanda, ruzha rwemahara uye isina kusvibiswa-isina.Kambani yedu inogona zvakare kugadzirisa midziyo yedoro zvinoenderana nemamiriro chaiwo ehotera yega yega, kuitira kuti midziyo yedoro ive hardware yekuvandudza giredhi rehotera.Idzi mhando dzekugadzira waini-panzvimbo uye waini yekuravira mabhawa nemaresitorendi zvawedzera kuoneka muhupenyu hwemudhorobha.
Kuva nemba yedoro muhotera zvakangofanana nekuvaka bhizi.Haangogone kuburitsa doro nyoro rinotonhora muzhizha uye doro rinodziya munguva yechando, asi zvakare kupa hutano hutsva hwaro hune kunaka kwakasiyana uye kudya kune vatengi vakasiyana, senge yero doro, dema doro, dzvuku doro, spirulina girini doro uye michero yakasiyana. flavour fresh beer revakadzi.Haikwanise kuburitsa doro pasaiti chete, asi zvakare ita kuti vatengi vanzwe runako rwakasiyana rwekugadzirwa kwedoro remhando yepamusoro vachinakidzwa nekunwiwa kwepamusoro.
Nhevedzano dzedoro rinobikwa nemidziyo yedoro reGerman -- bhari doro, rye doro, spirulina doro, balsam pear doro uye waini inotapira - rave iro rinodiwa pamusika wekushandisa doro.Zvigadzirwa zvedoro rakazvibikira ndeweAustralia malt, Czech top hops uye yeGerman nyowani mbiriso, pasina kuwedzera chero zvinhu zvekubatsira, zvakaita semupunga, uye kutarisa pakusimbisa hutano hwehutano hwebhari Inogona kuderedza ropa lipid, kupfavisa tsinga dzeropa, kunatsiridza. kushanda kwemoyo, kudzivirira kenza uye kudzivirira kufutisa mushure mekunwa.
Zvakapfuura: Diki Yoghurt Equipment
Zvinotevera: Mugaba Hove Equipment
Chibereko Chinopisa Orange / Mazambiringa / Muto / Chinwiwa Chinotapira /...
Kutengesa Kupisa Yakaiswa Muchero Jam Uye Muto Wemichero...
Customized Craft Beer Production Line Craft Be...